Anjarantsika ny sainao | Martech Zone
Anjarantsika ny sainao
Alahady 20 aprily 2008 Alahady Oktobra 4, 2015 Douglas Karr
Nandritra ny herinandro vitsivitsy lasa izay dia naka sy nametraka boky aho - ny iray tamin'izy ireo dia ny The Big Switch, nataon'i Nicholas Carr. Androany, vitako ny namaky ilay boky.
Nicholas Carr dia nanao asa mahafinaritra tamin'ny fananganana parallel teo amin'ny fivoaran'ny tariby herinaratra elektrika eto amin'ity firenena ity sy ny fahaterahan'ny computing cloud. Amin'ny fanamarihana mitovy amin'izany, Wired dia manana lahatsoratra mahafinaritra, antsoina hoe Planet Amazon, ao amin'ny famoahana azy tamin'ny Mey 2008 izay milaza ny tantaran'ny rahon'i Amazon. Aza hadino ny mijery azy io. Wired dia nanondro ny fanoloran'i Amazon ho Hardware as a Service (HaaS). Izy io dia fantatra amin'ny anarana hoe Infrastructure as a Service (IaaS).
Raha mankasitraka ny fahitan'i Nicholas ny informatika momba ny rahona sy ny hoavin'ny 'fomba' hivoarantsika atsy ho atsy aho, taitra aho rehefa nanomboka niresaka momba ny tsy azo ihodivirana izy. fanaraha-maso Ny solosaina dia mety hanana antsika rehefa nanohy nampiditra azy ireo isika - na dia biolojika aza. Ny boky dia manilika ny asa izay vitan'ny mpivarotra amin'izao fotoana izao amin'ny fampiasana angon-drakitra - ary saika mijery mampatahotra amin'ny toerana mety hisy izany amin'ny ho avy.
Isaky ny mamaky pejy an-tsoratra na tsindry amin'ny rohy na mijery horonan-tsary izahay, isaky ny mametraka zavatra ao anaty kalesy fiantsenana na manao fikarohana, isaky ny mandefa mailaka na miresaka amin'ny varavarankely fandefasan-kafatra mailaka izahay dia mameno amin'ny endrika "form for the record." … Matetika isika tsy mahalala ny kofehin-kodiarantsika ary ny fomba anaovan'izy ireo an-keriny. Ary na dia mahatsapa ho arahi-maso na voafehy aza isika dia mety tsy hiraharaha izany. Raha dinihina tokoa, mandray soa avy amin'ny personnalitéal izay ahafahan'ny Internet atao ihany koa isika - mahatonga antsika ho mpanjifa sy mpiasa tonga lafatra kokoa. Manaiky fanaraha-maso bebe kokoa izahay ho setrin'ny fanamorana bebe kokoa. Natao handrefesana ny tranon-kala, ary tsy faly izahay ao anatiny.
fanodinkodinana ary fanaraha-maso dia teny mahery be izay tsy azoko ekena. Raha afaka mampiasa angon-drakitra ho an'ny mpanjifa aho hanandrana sy haminany izay mety ho tadiavin'izy ireo, tsy mifehy azy ireo aho na manodikodina azy ireo hividy. Fa kosa, ho valin'ny fanomezana ny angon-drakitra, miezaka fotsiny aho hanome azy ireo izay mety ho tadiavin'izy ireo. Mahomby izany ho an'ny antoko rehetra tafiditra.
Ny fanaraha-maso dia manondro fa ny interface dia nandresy ny fahafahako misafidy malalaka, izay fanambarana mahatsikaiky. Zombie tsy misy saina daholo isika ao amin'ny Internet izay tsy manana fahaizana miaro tena amin'ny dokambarotra an-tsoratra napetraka tsara? Marina? Izany no mahatonga ny doka tsara indrindra tsy mahazo afa-tsy tahan'ny tsindry tokana tokana.
Mikasika ny hoavin'ny fampidirana ny olona sy ny milina, dia manantena ihany aho amin'ireo tranga ireo. Alao an-tsaina izany hoe afaka miditra amin'ny motera fikarohana izany ianao raha tsy mila fitendry sy fifandraisana Internet. Ny diabeta dia afaka manara-maso ny haavon'ny siramamy ao amin'ny rany ARY mamantatra ireo sakafo tsara indrindra hohanina hanomezana sakafo mahavelona. Amin'ny sakafo ve? Angamba azonao atao ny manara-maso ny fividianana kaloria isan'andro na manisa isa an'i Weight Watcher rehefa misakafo ianao.
Ny zava-misy dia tsy dia mahafehy tena loatra isika, ary tsy mampaninona izany AI. Manana tontolon'ny fahasalamana izay mosarena ny tenan'izy ireo isika, mampihatra voanjo manala ny tonon-taolana, mpidoroka mandainga, manambaka ary mangalatra mba hanamboarany… sns.
Ny fahaizana mitsambikimbikina amin'ny fampiasana klavie sy monitor ary 'mampiditra' amin'ny Internet dia tsy mampatahotra ahy mihitsy. Afaka mamantatra izany aho fanaraha-maso dia teny izay ampiasaina malalaka ary, amin'ny olombelona, ​​tsy zava-misy velively. Tsy nahavita nifehy tena mihitsy izahay - ary ny milina namboarin'olombelona dia tsy haharesy ny masinina tonga lafatra naangonan'Andriamanitra mihitsy.
Ny Big Switch dia mpamaky tsara ary ampirisihiko ny rehetra haka izany. Heveriko fa tsara ny fanontaniana apetrakao amin'ny faharanitan-tsaina artifisialy amin'ny ho avy, saingy i Nicholas dia nijery fomba fijery manaitra indrindra fa tsy fomba fijery matoky ny zavatra hataony amin'ny fifandraisan'ny olombelona, ​​ny famokarany ary ny kalitaon'ny fiainana.
Tags: kalandriemiady hevitrafamoronana votoatyfitantanana hetsikasehatra hetsikagoogle kalandrieicalbay piraty
Tsy handeha any amin'ny Barnes and Nobles aho anio!
Verizon: Ajanony azafady ny hadalana
Apr 20, 2008 ao amin'ny 8: PM PM
Mamakivaky ny bokin'i Nick ihany koa aho .. hatramin'izao dia tena mahaliana ny famakiana azy - manantena aho fa hijanona ho toy izany.
Apr 20, 2008 ao amin'ny 9: PM PM
Toa mpitsikilo kely amin'ny tontolon'ny teknolojia i Nicholas, saingy tena tiako ny mamaky ny bilaoginy ary tena tiako ity boky ity. Vao haingana, nahasarika ahy bebe kokoa tamin'ny boky tantara noho ny hafa – ary nanome hevitra lehibe momba ny fivoaran'ny famokarana angovo sy ny fitoviana amin'ny informatika i Nicholas.
Io no ampahany tiako indrindra tamin'ilay boky ary heveriko fa mifanaraka amin'izany ny fitovian'izy ireo. Na izany aza, rehefa nihoatra an'izany izy, dia niharatsy ny toe-javatra. Tsy hoe tsy zavatra tokony hanahirana antsika ny vaovao – fa heveriko fotsiny fa tsy noraharahiana ireo fahafahana mahagaga.
Mahafinaritra ny mamaky azy – tsy andriko ny hahita ny fandraisanao azy koa!
Apr 21, 2008 amin'ny 8: 04 AM
Misaotra amin'ny fahafantarana. Ekeko fa mety hivarotra boky ny tetika fampitahorana
ho an'ny mpamaky vaovao, fa ny zava-misy dia ny solosaina mitam-piadiana
data..aza ary tsy "hifehy izao tontolo izao".. CrAzy!!!
Marketing nandritra ny taona maro ary tsy matahotra ny PC-ko!